जानीराख्नुहोस्, छ घण्टाभन्दा कम सुते गम्भिर रोगको खतरा
एजेन्सी, २ माघ । मानिसहरु रातमा सुत्नुको सट्टा मोबाइल र इन्टरनेटमा व्यस्त हुने र बिहान चाँडै उठेर कामधन्धामा लाग्ने हुँदा उनीहरुको निन्द्रा पूरा हुन पाउँदैन । यसरी हेर्दा त्यस्ता मानिसहरु औसत दैनिक चार देखि पाँच घण्टा मात्र निदाउने गर्छन् । यदि तपाई पनि यही जिवनशैलीमा अभ्यस्त हुँदैहुनुहुन्छ भने सावधान हुनुहोस् किनभने यसले तपाईको स्वास्थलाई खराब मात्र बनाउने होइन गम्भिर रोग पनि उत्पन्न गराउने खतरा हुन्छ ।
आजभोलि अधिकांश युवाहरु स्लिपिङ डिसअर्डनबाट ग्रसित छन् । यसको परिणामस्वरुप उनीहरुमा आक्रोश र हिंसा बढेको पाइन्छ साथै सोच्ने क्षमतामा पनि गिरावट आएको छ ।
हामीलाई सामान्य लाग्ने यी ७ गल्ती, जसले किड्नीलाई ड्यामेज गराउँछ
के तपाईलाई थाहा छ नाङ्गै सुत्दा हुने यी ६ फाइदा ?
नियमित यौनसम्पर्क राखे पत्थरीबाट पाइन्छ छुटकरा
जानी राखौं पिसाब रोक्दा हुने यी अचम्मका ५ फाइदा
डोटीमा डेङ्गु रोगबाट एक जनाको मृत्यु
एक महिनामै सयभन्दा बढीमा डेङ्गुको सङक्रमण, कस्ता हुन्छन् लक्षण ?
ब्लड प्रेसर कम भएकाहरुले यस्ता उपायहरु अपनाउनुहोस्
प्रदेश, प्रदेश १, स्वास्थ्य